Wararka - WAAN SAMEEYNAA QAYBAHA KALE OO AWOODAHA SOO SAARAYA
LASTNFCAYAARTMqaybaha albaabbada awood u leh. Laga soo bilaabo cidhiidhiga albaabka dibedda ee qudhmay, illaa xaaqidda hoose, waxaan ka samaynaa qaybo albaabka dibedda ka mid ah oo si fiican u shaqeeya, rakibna dheereeya oo dheereeya.
LASTNFCAYAARTM waxay bixisaa qaybo albaab ah oo loogu talagalay codsiyada nidaamka gelitaanka oo ay ku jiraan xirmooyinka albaabka isku dhafan, leben bir ah, t-astragal, mullpost.
Albaabada Albaabadu waa kuwo waara, muddo dheer soconaya, oo waxay sare u qaadaan tayada iyo waxqabadka meesha laga soo galo marka albaabkeena loo adeegsanayo. Mowjadahayagu waxay ku yimaadaan noocyo kala duwan oo hadhuudh ah si ay u kabaan wixii dhisme ah ee dibedda ah.
LASTNFCAYAARTMqaybaha albaabku waa iskudhaf PCV ah oo la soo saaray iyada oo aan qudhmin, warping iyo kala. Iyagu waa kufsashada nidaamka albaabka laga soo galo.
Xulashada LASTNFCAYAARTM jamb isku dhafan oo loogu talagalay moolka oo u dhexeeya 4 inji ilaa 10 inji
Xulashada LASTNFCAYAARTM xirmooyinka albaabbada isku dhafan ee moolka oo u dhexeeya 4 inji ilaa 10 inji, hagaajinta nidaamka albaabka laga soo galo.
LASTNFCAYAARTM bulukeetiga isku dhafan wuxuu ka kooban yahay dayactir-la'aan, wuxuuna dhameystirayaa ilaalinta-xumaanshaha ee qaybaha kale ee jir.
LASTNFCAYAARTM mulls isku dhafan waa difaac rof-proff, waxay bixiyaan xoog looga baahan yahay nidaamyada albaabka daarta ama cutubyada isdaba jooga ah.
Qaybaha albaabka iyo dhinacyadu waxay ku daraan cabbir waxayna u abuuraan qaybo lahjad ah albaabbada laga soo galo. Astragal ma aha oo kaliya abuurista qeexitaanka albaabbada dhexdooda, laakiin waxay xireysaa farqiga u gaarka ah ee lagu darey waxayna ka hortageysaa iftiinka inuu ka soo baxo.
LASTNFCAYAARTM Isku-darka T-astragal malahan leexasho, dillaac ma leh, wuxuu bixiyaa badbaado sugan iyo waxqabad liita oo loogu talagalay nidaamyada laga soo galo.
LASTNFCAYAARTMqaybaha albaabku waxay bixiyaan tayada, amniga iyo ilaalinta nidaamyada laga soo galo. Nala soo xiriir maanta si aad wax uga weydiiso su'aalaha albaabbada WPC, T-baararka, bulukeetiyada, iyo sidoo kale T-astragals.